'बा आउनु भएको छैन'–युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ
‘बा आउनु भएको छैन’–युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ
युगले कोल्टो फेरे पनि देशमा परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन । प्रजातन्त्र आए पनि प्रजातन्त्र आए जस्तो लाग्दैन । समय र परिस्थिति हामीहरूका लागि अभैm अनुकूल भएको छैन । किनकि बाको शरीर बिग्रेको छ, प्रजातन्त्रका निम्ति विगुल फुक्दा कालकोठरीमा बसी भर्खरै जेलजीवनबाट छुटेकोले होला मेरी आमालाई डर लाग्नु स्वभाविक हो । त्यसैले आमा सधैं कराउनु हुन्छ तिम्रो बा आउनु भएको छैन । पानी झ्वाम झ्वाम परिरहेको छ । हावा बेसरी चलिरहेको छ । समयले रातलाई बोलाएर होला सबैको घर–घरमा बत्ती बलिसकेको छ । तैपनि बा आउनु भएको छैन । किन होला कतै पानी परेर बसिराख्नु भा को हो की ? कतै हावाहुरी चलेर ओट लाग्नु भा को हो की ? कतै समस्यामा अल्झिरहेको हो की ? कतै बाटोमा अध्यारो भई हिँड्न गाह्रो भैरहेको हो की ? थाहा छैन, अहिलेसम्म बा किन नआउनु भएको होला ? खैं के कामले बाहिर जानु भएको होला ? हे भगवान् ! हामीलाई रक्षा गर । मेरो बालाई छिट्टै घर पु¥याइ दिनु होला ।
भात पाकिसक्यो । समयले खाना खान बोलाई सक्यो । तैपनि बा आउनु भएको छैन । आमा एक्लै कराउँदै छिन् । मनमा नानाथरीका कुराहरूले माकुराको जालो बुन्दैछन् । कतै डर लागेर होला, कतै पीर परेर होला, त्रासैं त्रासमा शुभ–अशुभका नानाभाती कुराहरूले मन भत्काई रहेको छन् । मनभित्र आगो बालेर, मनभित्र हावाहुरी चलेर, मनभित्र अध्यारो भएर, मनभित्र समय मरिरहेको छ । मेरो बा अहिलेसम्म घरमा आउनु भएको छैन । पकाएको भात चिसो भई सेलाई सकेको छ । किन होला ? के भैरहेको होला ? कसरी बसिरहेको होला ? कहाँ छ होला ? यो आँखाले बालाई खोज्दैछ । यो मनले बालाई सोद्धैछ । बा अहिले तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ ? बा आउनु भएको छैन भनी आमा रुन्दैछिन् । हाम्रो परिवारमा आज किन हो कुन्नी संकटको कालो बादल मडारिदैं छ । झ्वाम झ्वाम पानी परेकोले होला । हावाहुरी चलिरहेकोले होला । बाटो सुनसान छ । घर घरमा झ्याल–ढोकाहरू बन्द भैसकेको छ । सबैले भात खाएर सुत्ने तर्खर गर्दैछन् । तैपनि मेरो बा आउनु भएको छैन । हे ईश्वर ! यो कस्तो वज्रपात हो । हे ईश्वर ! यो कस्तो संकट हो ? जहाँ जसले जे गरे पनि चुप लागेर सहनु पर्ने यो कस्तो विवशता हो ?
आज मेरो बालाई के भैरहेको छ ? संकटै संकटको भूमरीमा मेरो बा कुनबेला निस्किने हो ? थाहा छैन हे भगवान् ! मेरो बालाई हाम्रो कति पीर परिरहेको होला ? मेरो बा कुनबेला टुप्लुक्क आइपुग्ने होला ? मनमा असाध्यै पीर परिरहेको छ । पीरै पीरमा हाम्रो परिवार सुक्न थालिसकेको छ । हे ईश्वर ! यो पानी पनि किन परिरहेको होला, एकछिन रोकि दिएको भए के हुन्थ्यो ? यो हावा पनि कति चलिरहेको होला, एकछिन रोकिदिएको भए के हुन्थ्यो ? यो बत्ती पनि किन चाँडै बालेको होला, अलि ढिलो बालिदिएको भए के हुन्थ्यो ? आमाले भात पनि किन चाँडै पकाएको होला ? अलि ढिलो पकाएको भए के बिग्रिन्थ्यो ? किनकि मेरो बा आज काम विशेषले घर आउन अलि ढिलो भएको हुनसक्छ । हामी बासँगै ढिलै भात खाई दिए के हुन्थ्यो ? सधैं चाँडै खानु पर्छ भन्ने के छ र ? आमा बालाई सम्झेर नरुनु होला । एकछिन ढिलो भएर के भो ? बाहिर पानी परिरहेको छ । हावा चलिरहेको छ । घर–घरमा बत्ती बलेर भात पाकिसक्यो भन्दैमा मेरो बा यस्तो पानी परि हावाहुरी चलिरहेको बेला घरमा कसरी आउन सकिन्छ ? कतै ओट लागेर बसिरहेको होला । मनभरी पीर लिएर चाँडै जान्छु भनी सोचिरहेको होला । आमा तपाईं रोएर के गर्नु ? तपाईंको रुवाईले हाम्रो मात्र होइन बाको छाती पनि पोल्न सक्ला । बा एकछिन ढिलो आएर के भो ? परिस्थितिले हामीलाई सबै कुरामा ढिलो बनाई राखेको छ ।
समयले अबेर ओढिसक्यो
आमा कराउनु भइरहेछ
प्रजातन्त्रले युगलाई बदलिसकेको छ । हिजोको जिब्रोछाप शासन र चाकडीतन्त्र अन्त भई अन्याय र अत्याचारीहरूलाई जनताले परास्त गरि आज नयाँ युगको जन्म भैसकेको छ । हामी नेपालीहरूलाई बाँधिराखेका फलामका जन्जीर पनि आन्दोलनले टुक्रा–टुक्रा पारेर फ्याँकिसकेको छ । समयचक्रले समय मागे पछि यो संसारमा तानाशाहीहरू आज इतिहास भैसकेका छन् । त्यसैले युग बदलिसक्यो । राणा शासन ढलिसक्यो । जनताले इच्छाएको प्रजातन्त्र आईसक्यो । अब देशमा जनताद्वारा चुनिएका छोरा–छोरीहरूले शासन गर्ने छ । बिसंगतिका कुराहरू निर्धक रूपमा सही आलोचना गर्न पाउने छ । कसैको डर त्रासमा होइन, कसैको चाकडी र चाप्लुसीमा होइन, कसैको निगाहमा होइन, कसैको इशारामा होइन केवल प्रजातन्त्रमा जनताको कुरो बोल्ने हो । जनताका निमित्त लड्ने हो । काम नलाग्ने मक्किसकेका राणा शासन ढलेर अब नेपालीहरू खुल्ला आकाश भैंm आजादी भएको छन् ।
भनिन्छ, प्रजातन्त्रभित्र थुप्रै रगत र पसिना लुकेको हुन्छ । त्यो रगत र पसिनालाई हामीले सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न सकिएन भने हामी नेपालीहरू रुनु पर्नेछ । कठोर यातना सहेर आफ्नो ज्यान बलिदान गर्ने शहीदहरूको पनि श्राप लाग्ने छ । उज्यालोका लागि रातभरी हिँड्ने असंख्य वीर योद्धाहरूको मुटु फुट्ने छ । आजादीको लागि प्रजातन्त्रको आवाज बोक्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूको बाटो भत्किने छ । त्यसैले हामी आफ्नो जन्मभुमिको कल्याण र विकासको लागि कठोर मेहनत गर्नु छ । आफ्नो शीप र कलाहरू यही माटोमा रोप्नु छ ।
समय बलवान छ । समयले प्रजातन्त्र ल्याइसकेको छ । तर प्रजातन्त्रले अहिलेसम्म आजादी ल्याउन सकेको छैन । कहिले नटुट्ने फलामको जन्जीर त टुक्रा पारिसकेको छ तर टुक्रा टुक्रा परेको त्यो जन्जीर अहिलेसम्म थान्कोमान्को लगाउन सकेको छैन । प्रजातन्त्र त आइसेकको छ तर प्रजातन्त्रले देशको उन्नति गर्न सकेको छैन । त्यसैले सिधासोझा जनताको यौटै प्रश्न छ, प्रजातन्त्र आएर पनि किन प्रजातन्त्र आउन बाँकी छ ?
थाहा छैन, आमा सधैं कराई रहनु हुन्छ । तिम्रो बा सधैं ढिलो किन आउने गर्छ ? शायद आमालाई लाग्दो हो प्रजातन्त्र आए पनि पूर्ण प्रजातन्त्र अहिलेसम्म आएको छैन । त्यसैले अगुल्टोले हानेको कुकूर बिजुलीदेखि तर्सिन्छ भने भैंm प्रजातन्त्रका लागि थुप्रै अमानवीय यातना भोगेर जेलनेल परेका अनि सम्पूर्ण नेपालीहरूको मनमा प्रजातन्त्र आइसक्यो भनी अभैंm विश्वास गर्न सकिरहेको छैन । किनकि प्रजातन्त्रभित्र जनता बलियो हुनु पर्छ । प्रजातन्त्रभित्र देशको उत्थान हुनुपर्छ । प्रजातन्त्रभित्र गाँस, बास र कपासको समस्या समाधान हुनुपर्छ । प्रजातन्त्रभित्र सबै ठाउँमा जनता भिज्नु पर्छ । तर खैं ? यो त शिशु प्रजातन्त्र हो । यो शिशु प्रजातन्त्रलाई राम्रोसँग हेर बिचार गर्न सकिएन भने कसैले अकालमैं मार्न सक्छ । त्यसैले मेरी आमालाई डर लागेको हुन सक्छ । तिम्रो बा सधैं ढिलो आउँछ भनी पीर परेको हुन सक्छ ।
भन्दछ जन्जीर टुटिसक्यो
अझ पनि आजादी आएको छैन
प्रगति आएको छैन
प्रजातन्त्र आएको छैन ।
राणा शासनकालमा देश अन्धकार थियो । चाकडी प्रथा देशभक्तीको पहिचान हुन्थ्यो । चाप्लुसी प्रथा योग्यताको कदर मानिन्थ्यो । शासकको इच्छा नै कानून थियो । देखाउने र चपाउने हात्तीको दाँत जस्तो जसको जे इच्छा छ त्यही नै कानून बन्थ्यो । त्यसैले मान्छे मारेर सत्ता कब्जा गर्ने उक्त समयमा न बोल्न पाइन्छ न लेख्न पाइन्छ । न सोध्न पाइन्छ, न हेर्न पाइन्छ । अन्धकारमा देशलाई हिँडाईरहेको थियो । जनता–जनताबीच डर पैदा गरिराखेको थियो । किनकि आपूm बाँच्नका निम्ति अरुलाई भए नभएका झुठ्ठो लान्छना लगाउने चलन थियो । जसले धेरै चाकडी र चाप्लुसी गर्न सक्यो उसको जीत हुने समय थियो ।
समय गतिशील छ । आज जस्तो भोलि नहुन सक्छ । त्यसैले क्रान्तिका आवाजहरू एक कान दुई कान मैदान भएर प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि अन्धकारको टाउँको फुटालिसक्यो । उज्यालोका लागि, नयाँ सुनौला किरण पाउनका लागि, भविष्यमा मान्छे भएर बाँच्नका लागि, तानाशाही होइन जनताको इच्छाले शासन चलाउनका लागि नेपालीहरूको साझा विचार र कल्पनाले आज साकार पाइसकेको छ । नेपालको माटोमा प्रजातन्त्र रोपिसकेको छ । त्यसैले अब देश विकास गर्नका लागि अधिकार मात्र होइन कर्तव्य पनि पालना गर्नु पर्दछ । आफ्नो घर, आँगन मात्र सफा राख्ने होइन सबै मिलेर सिङ्गो देशलाई सफा राख्नु पर्छ । तब मात्र देशले जनताको इच्छा र आकांक्षालाई आत्मसाथ गरेको आभास हुन्छ । होइन भने प्रजातन्त्रको अर्थ के हुन सक्छ र ? नयाँ विहानीको अर्थ के हुन सक्छ र ? हिजो जे छ आज पनि त्यही हुने हो भने अन्धकारको ठाउँमा उज्यालो भए पनि मनको आँखाले अन्धकारै देखिने छ । विचार र कल्पनाहरूमा केही परिवर्तन आए पनि जनताले खोजेको परिवर्तन नआएसम्म नयाँ युगको थालनी भयो भनी कसरी भन्न सकिन्छ ? त्यसैले नयाँ युग आएको छैन । अभैm पनि नयाँ विहानी आएको छैन । किनकि नयाँ युग र नयाँ विहानीमा हिजोको कथा दोहोरिने छैन । आमा सधैं कराईरहनु हुन्छ । तिम्रो बा आउनु भएको छैन । रात झमक्क परेर होला प्रश्नै प्रश्नको सियोले मनमा घोचिरहन्छ ।
हाम्रो विचारको घुयेत्रोले
हाम्रो कल्पनाको बज्रले
अन्धकारको टाउको फुटिसक्यो
अझ पनि नयाँ विहान आएको छैन
नयाँ युग आएको छैन
नेपालमा प्रजातन्त्र आइसके पनि प्रजातन्त्र आइनसकेको कुरा युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले वि.सं. २००९ सालमा प्रस्तुत कविताको रचना भएको देखिन्छ । युग परिवर्तन भएर मात्र पुग्दैन, परिवर्तन भए जस्तो पनि हुनु पर्दछ । जनतालाई महशुस हुने गरी राज्य सत्तामा मात्र होइन आर्थिक क्रान्ति गरी गाँस, बास र कपासमा पनि आमूल परिवर्तन गरी प्रगति गर्न सक्नु पर्दछ । होइन भने प्रजातन्त्रका लागि ज्यानको बाजी राखेर विद्रोहीका आवाजहरू ओकल्ने वीर योद्धाहरूले गरेका थुप्रै त्याग, तपस्या र जेलनेलका यातना मात्र होइन आफ्नै प्राणको बलिदान गरी शहीद भएका महान अमर आत्माहरू समेत ओझेलमा पर्ने छ । त्यसैले युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई पीर पर्नु स्वभाविक हो । बा आउनु भएको छैन भनी आमा कराइरहनु परिस्थितिको चित्रण हो । हिजो यौटा अन्धकारको युग थियो । त्यो अन्धकारलाई चिरेर आज उज्यालोको युग जन्म भैसकेको छ । नयाँ परिवे शमा नयाँ नयाँ कुराहरूको शुरुवाट गरी देश विकास गर्नका लागि जनता बलियो पार्नु पर्छ ।
प्रकासित मिति २०७८–८–७
युगकविको कविता “महाकवि देवकोटालाई”
“विजया“ कविता र युगकवि सिद्धिचरण